Video: Sirta Xatooyada Natiijooyinka Mashiinka Goobidda
Sirta Xatooyada Natiijooyinka Mashiinka Raadinta
Jimco, Janaayo 6, 2012 Jimco, Janaayo 6, 2012 Douglas Karr
Saaka waxaan dirayaa kuweena tababarka iibka dadyahow shaashadda screens bogga 1 ee raadinta Tababar iibinta Sandler. Gaar ahaan natiijooyinka bogga ayaa ah inay jirto natiijo fiidiyoow ah - xarunta tababarka Charlotte Sandler. Cinwaanka fiidiyowga iyo sharraxaaddiisa si fiican ayaa loo hagaajiyay si loogu helo natiijooyinka raadinta.
Fiidiyowgaan wuxuu soo jiitaa dareen badan sida sawirka kaliya ee lagu soo bandhigay bogga, waxaanan ku kalsoonahay in heerka gujintu uu fiican yahay. Sharaxaadda fiidiyowga ayaa sidoo kale ka bilaabaneysa xiriir toos ah oo toos ugu galaya goobahooda shirkadeed, sidoo kale, si looga caawiyo waditaanka beddelaadda. Shirkadooda waalidka ee shirkada uma ogola inay wax ka badalaan ama ka shaqeeyaan boggooda internetka, sidaa darteed awooda ay u leeyihiin inay soo bandhigaan fiidiyowyadu waxay noqon karaan habka ugu weyn ee xarumahan tababarka ay dhab ahaantii u fiirsanayaan matoorada raadinta.
Ma aha oo kaliya Youtube waa mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn adduunka, waxay sidoo kale soo bandhigaan natiijooyinka fiidiyowga oo ah qayb ka mid ah natiijooyinka mashiinnada raadinta badan ee Google. Dad badan ayaan si fudud u rabin inay wax akhriyaan… waxay rabaan inay si toos ah ugu boodaan fiidiyoow. Natiijo ahaan, fiidiyowgu wuxuu ahaa sir qarsoodi ah oo muddo dheer ah shirkadaha suuq-geynta ee soo galaya, gaar ahaan bogagga leh shuruudaha raadinta ee tartanka aadka u sareeya. Tusaalaha kore waa mid weyn… oo leh tababarka iibka Sandler ee magaalo kasta oo weyn, dhammaantood way ku tartamayaan boos iyo shirkadaha tababarka iibka tartanka waxay sidoo kale rabaan natiijooyinka raadinta sidoo kale!
Fiidiyowgu wuxuu si dhakhso leh u noqonayaa qayb muhiim ah oo ka mid ah awoodda shirkadda si ay ugu wargeliso macaamiisha, adeegyada suuqa iyo kordhinta joogitaanka websaydhka. Dhisida awooda darajaynta Youtube ee softiweerka SEO-ga ah waxay siisaa macaamiisheenna aragtiyo muhiim ah si loo hubiyo in ganacsigooda ama adeegoodu ka muuqdo bogga koowaad ee Youtube iyo waliba Google. Krista LaRiviere, Cofounder iyo agaasimaha guud, shaybaarada gShift
Fiidiyowgu aad ayuu muhiim u yahay, dhab ahaantii, in shirkaduhu jecel yihiin shaybaarada gShift isku daray Raadinta fiidiyowga Youtube si toos ah qormooyinkooda mashiinnada raadinta:
shaybaarada gShift ayaa sidoo kale macaamiishooda siisay fiidiyow ka caawinaya inay u wanaajiyaan fiidiyowyadooda Youtube si loo hagaajiyo darajooyinka:
Cinwaanka boostada, sharaxaadda iyo astaamaha ayaa ah qodobbo muhiim u ah isticmaalka ereyada muhiimka ah si wax ku ool ah. Isku day inaad u adeegsato ereyada muhiimka ah ereyada ugu horreeya halkii aad ka isticmaali lahayd bartamaha ama ereyada ugu dambeeya cinwaanka iyo sharaxaada. Haddii aad dib ugu riixeyso booqdayaasha boggaaga, waxaan si aad ah ugula talineynaa inaad URL u dhigto qeybta ugu horeysa ee sharraxaadda. Youtube kaliya waxay muujineysaa sadarka koowaad ee sharraxaadda illaa aad gujiso ballaadhin, markaa haysashada xiriiriye si muuqata loo soo bandhigo waxay abuuri doontaa taraafikada badan ee boggaaga.
Mar 31, 2012 at 3: 13 AM
Douglas, wanaagsan waad sharraxday muhiimadda fiidiyowyada. Laakiin ii sheeg hal shay: Miyaan u baahanahay inaan soo dejiyo fiidiyowgeyga ama waxaan ka soo qaadan karaa fiidiyow la xidhiidha YouTube, tusaale ahaan?
Tan waxaan weydiisanayaa sababta oo ah inta badan, dadka wax qora ee wax qora ma haystaan ​​ilo ay ku duubaan fiidiyoow oo ay ku soo rogaan.